यी ३ राशिका मानिस जन्मिदै लिएर आउछन्, धन कमाउने योग, सानै उमेर देखि कमाउन थाल्छन् पैसा – Paluwa Khabar
बैसाख १३, २०७८ सोमबार 222
काठमाडौ । तपाईलाइपनि अनौठो लागेको हुनुपर्छ कसैले कलिलै उमेरमा ह्वात्तै पैसा कमाउन थाल्छन् । उदाहरणका लागि अशोक दर्जी, सचिन परियाल, कमला घिमेरेहरु हेर्नुहोस् न भाडाकुटी खेल्ने उमेरमा नै पैसा र नाम कमाउन थाले । यो उनीहरुले जन्मिदै लिएर आएको योग हो ।
ज्योतिशी शास्त्र अनुसार मानिसहरुको भविष्यवाणी आफ्नो राशिहरुबाट हुन्छ । राशि जन्मिएको समयमा निर्धारित हुन्छ । तपाईको जन्म कुन कोखबाट भयो भन्ने हैन कुन समयमा भयो भन्ने प्रमुख कुरा छ । किनभने जन्म, विवाह, मृत्युको लागि पनि राशि आवश्यक हुन्छ ।
कन्या राशि : यो राशि हुने ब्यक्ति अरु राशिहुनेहरु भन्दा बिलकुलै फरक हुन्छन् । किनभने उनीहरुसगँ आत्म विश्वास र कठोर परिश्रम र हरेक काम गर्नु पूर्व सोचेरमात्र काम गर्ने भएकाले यस्तो शुभ रहेको छ । जो एकदमै भाग्यमानी हुन्छन् ।
वृष राशि : यो राशि हुने मानिसहरु पनि सधै जीवनमा छिट्टै सफलता हात पार्ने हुन्छन् । किनभने यो राशि हुनेहरु शान्त , आफ्नो निर्नयमा अडिग रहने , मेहनती र जस्तो सुकै दुखमा पनि बाच्ने भएकाले यो राशि हुने ब्यक्तिले प्रशस्त धन आर्जन गर्छन् ।
धनु राशि : यो राशि हुने मानिसहरु पनि अत्यन्तै सालिन स्वभावका मिहेनती हुनाले प्रशस्त धन कमाउने हुन्छन् । किनभने हरेक काम गर्दा नया नया तरिका अपनाएर काम गर्नुको साथै थोरै पैसालाई जम्मा गरेर धेरै बनाउने हुन्छन् ।
Prevआज बैशाख 13 गते सोमबार दक्षिणकाली माताको दर्शन गरि आजको रासिफल हेर्नुहोस लाभ हुनेछ।
Nextमलेसियामा एक नेपाली कामदारको हृदयाघातका कारण मृ’त्यु ! मनमा अलिकति दया भए पूरा पढेर (Rip) लेख्नुहोला
कहिले आउन पाउँछन् नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया? हेर्नुहोस यस्तो आयो समाचार।
श्वे’ताले भावुक हुँ’दै यसो भनिन,( हेर्नु’स भिडि’यो )
माओवादीका हजाराैँ कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गर्दै
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (382)
१.	नयाँ को-रोनाको यस्तो लक्षण देखिनासाथ सत’र्क हुनुहोला, थाहै नदिइ ज्या’ न लान सक्छ, सबैले जान्नै पर्ने २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोसय (104)